Su’aal ku socota kuwa ka fikiraya ku noolaanshaha jacayl run ah: jacaylkaagu waxa uu wajahayaa geeri, isagu / iyadu waxay sugeysaa ku wareejin, laakiin ma leh tabaruc “Waxaan kuu sheegaynaa inaad la jaan qaadi karto oo aad iska dhaafi karto xubin »
Posted By: KongoLisolowaa: May 12, 2020 12: 12 No Comments
Ma dooneysaa inaad noloshaada ka quusato oo aad ku tabarucdo qalbigaaga si laguugu gudbiyo si aad u badbaadiso qofka aad jeceshahay? … Haa ama maya ?? U sharax naftaada! Akhri wax dheeraad ah
Adeegsiga erayga ilmaha ee Gabdhaha Madow / Afrikaanka: ereyga dhallaanka waxaa si khaldan loogu isticmaalaa gabdhaha madow / Afrikaanka "Ereyga ilmaha wuxuu noqdaa sidii eray macaash ama ganacsi"
Posted By: KongoLisolowaa: May 12, 2020 08: 08 No Comments
Ilmo, waa bisha Sebtembar, dib ugu noqo dugsiga ilmahayga fadlan. Halkaas, waxaad noqoneysaa hay'addiisa UNICEF (Sanduuqa Qaramada Midoobay ee Caruurta iyo Waxbarashada). »Ilmaha, ... Akhri wax dheeraad ah
Qosol, dildilaac ciribta iyo tuubbooyinka gacanta: dadka qaar waxay leeyihiin dillaac ciribta
Posted By: KongoLisolowaa: May 10, 2020 11: 01 No Comments
Waa maxay dildilaacyadaani afkaaga hooyo? Weligaa cagahaaga ma ku aragtay cagahaaga? Xagee ku taqaan qof sida ... Akhri wax dheeraad ah
Immisaad jeceshahay lammaanahaaga? Waa maxay kalgacalka jacayl ee aad u sameyso lamaanahaaga si aad ugu muujiso inaad isaga jeceshahay?
Posted By: KongoLisolowaa: May 10, 2020 07: 16 No Comments
Waa maxay baahida lamaanahaagu jacaylka u qabo? Markaad sidan sameyso, waxaad u qiimeyneysaa heerkee ama boqolleykeeydhka ?? 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Akhri wax dheeraad ah
Waa sheeko saaxiibtinimo qurux iyo gabow leh oo ku dhammaata dariiqa ugu lama filaanka ah: Nin Madow / Afrikaan ah wuxuu lahaa saaxiibkiis Shiinaha; ninkan Shiinaha ah ayaa sawir-qaade ahaa "Intii uu Shiinuhu ka shaqaynayay sawirradiisa, mid ka mid ah afartaan aroornimo, Saaxiibkiis Madow / Afrikaanka ah ayaa ka baryay inuu ka dhigo mid ka mid ah sawirkiisa" Kan Shiineeska ah ayaa oggolaaday inuu aqbalo
Posted By: KongoLisolowaa: May 6, 2020 03: 00 No Comments
Shiineysku wuxuu diyaariyay agabkiisa, Madow / Afrikaanku hortiisuu taagnaa. Iyada oo xamaasad leh oo aan dib u dhac lahayn, ayuu sawir-qaade Shiinees ah bilaabay inuu shaqeeyo. Shaqadiisii ​​ayuu ka maqnaa. Wuxuu ku yidhi saaxiibkiis N ... Akhri wax dheeraad ah